TOP 5 Sạc dự phòng Baseus tốt, được yêu thích nhất 2022 | Muasalebang - Muasalebang
TOP 5 Sạc dự phòng Baseus tốt, được yêu thích nhất 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: TOP 5 Sạc dự phòng Baseus tốt, được yêu thích nhất 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Ukuthuthukiswa kwempilo kubandakanya ukushintshwa kobuchwepheshe, izinto zikagesi ziya ngokuya zithuthukiswa ukuze kulethe izinto ezingcono kakhulu kubantu. Lapho, ikhophi yasenqolobaneni yebhethri elishajekakayo ingabhekwa njengokusungulwa kwempumelelo, ibe “ingalo” ephumelelayo yama-smartphone. Okudume kakhulu manje I-Beaseus Power Bank. Ukuze ufunde kabanzi ngalo mkhiqizo, sicela ubheke esihlokweni Ukubuyekezwa okusheshayo kokungu-5 okuphezulu okuhle nokufanelekile ukuthenga amabhange kagesi e-Baseus Owethu ngezansi..
1 Mayelana ne-Baseus power bank brand
2 Ukuhlolwa kwebhange lamandla e-Baseus kuhle?
3 Amabhange aphezulu angu-5 ahamba phambili nadume kakhulu e-Baseus ngo-2022
3.1 3.1 I-Baseus 10000mAh Gentleman Digital Display Powerbank
3.2 3.2 I-Baseus 20000mAh Power Bank – I-Baseus Adaman Metal
3.3 3.3 I-Baseus Bipow 10000mAh ibhange lamandla 18W
3.4 3.4 I-Premium Baseus M36 ibhange lamandla angenantambo
3.5 3.5 I-Baseus 18W Parallel PD Power Bank Power Bank
Mayelana ne-Baseus power bank brand
I-Baseus yaziwa njengophawu lwezinsiza zocingo olusuka e-Hong Kong futhi okwamanje ngaphansi kweqembu le-Shenzhen Times Innovation Technology. Uhlobo lwe-Baseus lwazalwa ngo-2009, luholwa nguMnu.CU. Ukuqondisa kwe-Baseus ukuklama nokudala izesekeli zobuchwepheshe zangempela ezibukeka njengemfashini. Isiqubulo sokusebenza se-Baseus sithi “Baseus on user”, sisho ukuthi inkampani izothatha amakhasimende njengesisekelo sentuthuko.
Ibhrendi ye-Baseus njalo uma yethula imikhiqizo emisha, ihlale izibeka ngaphansi kombono womsebenzisi ukuze ibe nekhwalithi engcono kakhulu kanye nedizayini emisha. Ngokukhethekile, imikhiqizo ejwayelekile ye-Baseu ingashiwo: Amakesi efoni, amakesi esikhumba, izikhwama zesekeli, I-Baseus yebhethri eyisipeleingilazi epholile…. I-Baseus Power Bank Umkhiqizo waziswa kakhulu futhi wemukelwa abathengi ngenxa yekhwalithi yawo enhle kakhulu.
Ukuhlolwa kwebhange lamandla e-Baseus kuhle?
Amabhange kagesi ase-Baseus aya ngokuya ethandwa, hhayi ngaphansi kwamanye amabhange kagesi njenge-Xiaomi, i-Samsung noma i-LG. Kodwa ukwazi kahle Ingabe i-Baseus power bank ilungile?Ake sihlole izinzuzo nezibi ezilandelayo.
Umkhiqizo I-Baseus yebhethri eyisipele ithathwe ezinkampanini ezidumile emhlabeni wonke, ezinze emazweni amaningi. Ngaphezu kwalokho, leli bhange lamandla liphinde lakhiwe emigqeni yesimanje yezobuchwepheshe, ngekhwalithi nokuphepha.
Ukwakhiwa kwamabhange amaningi e-Baseus kulula kodwa kuhlangene futhi kuyinkimbinkimbi. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo ye-Baseus ihloselwe usayizi ohlangene kanye nesisindo esiphansi. Ngaleyo ndlela ikwenza kube lula futhi kube lula kubasebenzisi ukuyiphatha.
I-Power Bank Baseus Iphinde ibe nenzuzo yokuklama izimbobo zokuphuma zokushaja ezingu-2, okuyimbobo ye-USB engu-1 QC3.0 kanye nembobo yohlobo lwe-C PD3.0 engu-1 ukuze inikeze amandla okushaja ngokushesha amadivayisi angu-2 ngesikhathi esifanayo kuyilapho aphephile, ngaphandle kokudala umonakalo. .zithintane.
Umthamo webhange lamandla we-Baseus uhluke kakhulu, ukusuka kokuphansi kuye kumthamo omkhulu ngaphezu kuka-20000W. Lokhu kukunikeza izinketho eziningi lapho uthenga.
Enye inzuzo yebhange lamandla e-Baseus ukuthi izinto eziningi ezisezingeni eliphakeme ze-ABS + PC Carbon, ziphephile, zigwema umlilo, ukuqhuma, imihuzuko.
Intengo ikusegimenti ephezulu kunamanye amabhange kagesi ajwayelekile emakethe. Ngaphezu kwalokho, nakuba ithuthuka kabanzi, kodwa I-Baseus Power Bank abakafinyeleli kumakhasimende amaningi.
Bhekisela: [Review-2021] Amabhange aphezulu angu-5 angcono kakhulu elanga
Amabhange aphezulu angu-5 ahamba phambili nadume kakhulu e-Baseus ngo-2022
Ingabe ufuna ukuthenga ibhange lamandla, i-Baseus yebhethri eyisipele? Kodwa awazi ukuthi yiluphi uhlobo lokukhetha ngoba amamodeli ahlukene kakhulu? Ungakhathazeki ngoba maduze nje kuzoba khona Imikhiqizo emi-5 ephezulu yasebhange lamandla e-Baseus Ikalwe kahle kakhulu ngo-2022 ukuze uthole isithenjwa sakho.
3.1 I-Baseus 10000mAh Gentleman Digital Display Powerbank
I-Baseus Gentleman power bank isekelwe futhi ihambisana nawo wonke amadivayisi ama-smartphone namathebulethi emikhiqizo edumile yanamuhla. Umkhiqizo waziswa kakhulu ngokubukeka kwawo okuhlangene nokulula, ngosayizi 145mm ubude x 65mm ububanzi no-15mm kuphela ubukhulu. Ngakho-ke, ungakwazi ukuthwala ishaja kalula noma kuphi lapho uya khona, ngisho nesikhwama sakho, ngisho nephakethe lakho, ngaphandle kokubanjwa futhi unzima.
Ngaphezu kwalokho, ibhange lamandla e-Baseus libuye libe nendawo eyenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme ze-ABS + PC. Ngakho-ke kunamachashazi amaningi amancane ngaphezulu ukuze abambe ngokuqinile, ngokushelelayo, okungahambisani nokushelela kanye nezigxivizo zeminwe kubasebenzisi. Ngokuhambisana nalokho iphrosesa ehlakaniphile ekuqashelweni kwedivayisi kanye nebhalansi yamanje. Umkhiqizo ufakwe ukuvala shaqa okuzenzakalelayo ngemva kokuba ibhethri selishajwe ngokugcwele, ngakho kuphephe kakhulu futhi kuvikeleke kudivayisi yakho. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo futhi ulondoloza umthamo omkhulu webhethri futhi awubangeli idivayisi ukuthi ishise.
Ukwazi umthamo osele we I-Baseus Power Bank, ukwakheka komkhiqizo kuhlanganiswe isikrini se-LCD sesimanje. Ibonisa imininingwane yomkhiqizo kahle, ehlanganiswe namandla afika ku-10,000 mAh – 38Wh, okuvumela ibhethri ukuthi lishajwe kabusha izikhathi eziningi.
Intengo yesithenjwa: 279,000 VND.
Ufuna ulwazi olwengeziwe: [Review] Izingcingo ezi-5 ezihamba phambili ezithengiswa kakhulu namuhla
3.2 I-Baseus 20000mAh Power Bank – I-Baseus Adaman Metal
I-Baseus 20000mAh Power Bank inomklamo ohlangene ngokwedlulele onegobolondo lensimbi elimbozwe ngopende we-matte, ngaleyo ndlela lisize ukuvimbela imihuzuko nezigxivizo zeminwe. Ngaphezu kwalokho, usayizi ohlangene nesisindo asisindi kakhulu, futhi iza nesikhwama esizwakalayo esizokusiza ukukuthwala uhambe naso.
Ibhange lamandla le-Baseus Adaman linomthamo ongu-20000mAh, elingasekela iningi lamazinga anamuhla wokushaja okusheshayo. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ubuye uhambisane namadivayisi amaningi edijithali namuhla kusukela ku-Macbook, i-Laptop kuya ku-smartphone. Ngaphezu kwalokho, umthamo omkhulu, amandla, ukusebenza kahle kufika ku-22.5W. Ngokuhambisana nalokho, kukhona izimbobo ezingu-3 (2 USB + 1 Type C) zonke ezisekela ukushaja okusheshayo, ukuze ukwazi ukushaja wonke amadivayisi angu-3 ngesikhathi esisodwa. Ukusuka lapho ungayisebenzisa ngokunethezeka kakhudlwana futhi ukhohlwe ngokukhathazeka kokuphelelwa ibhethri noma ngabe kusebhizinisini noma ekuhambeni.
Imbobo yokufaka yaleli bhange lamandla ifakwe izimbobo zokushaja okokufaka ezingu-3 okuhlanganisa: Umbani, I-Micro kanye Nohlobo C. Imbobo yokukhiphayo ihlanganisa nezimbobo ezingu-2 ze-USB + Type C ezivumela usekelo lwamaleveli amaningi okumisa ahlukene. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo uhlanganiswe ne-chip yeprosesa yamandla esizukulwane esisha esebenza kahle kakhulu, ukuzinza okuvelele kanye nendlela yokuvikela ehlakaniphile. Ibhethri eyisipele eshaja ngokushesha i-Baseus Adaman Metal Digital ineleveli kagesi ezinzile, ngakho iphephe kakhulu kumadivayisi nakubasebenzisi.
Intengo yesithenjwa: 650,000 VND.
3.3 I-Baseus Bipow 10000mAh ibhange lamandla 18W
Lona umugqa I-Baseus 10000mAh 18W ibhange lamandla Idizayini encane kakhulu (ugqinsi oluyi-16mm) idizayini eyingqayizivele, isisindo esilula. Ngaphezu kwalokho, indawo eyenziwe isitayela enemigqa ijikajika emzimbeni, ngakho izwakala inethezeke ngokwedlulele futhi iqinile esandleni futhi imelana nokunwaya. Ngomklamo we-Ultrathin, ibhange lamandla le-Baseus alikwazi ukumelana nokushaqeka nemithelela enamandla, ngaleyo ndlela ligwema ukuphuka noma ukulimala kudivayisi.
Ngakolunye uhlangothi, ibhange lamandla le-Baseus Bipow 10000mAh 18W PD+QC liphinde lisekele izindinganiso zokushaja ngokushesha ezinezintambo nezingenantambo namuhla. Nge-QC3.0+PD3.0 ehlanganisiwe yokushaja okuyindlela engu-2 ehlanganiswe nomthamo ongafika ku-18W. Ngaphezu kwalokho, ibhethri ifakwe 3 ukuphuma kwe-USB okulula, Type-C in/out kanye ne-Mic ezimbobeni ezivumela abasebenzisi ukuthi bashaje amadivayisi angu-3 ngesikhathi esisodwa. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi bangakwazi futhi ukushaja ifoni ngokungenantambo ngenkathi ibhange lamandla lishaja ngaphandle kokukhathazeka ngokushisa ngokweqile.
I-Baseus power bank iphinde isekele isixhumi esibonakalayo esincane futhi i-Type-C in ingashajwa ngokugcwele emahoreni angu-3 kuya kwangu-4. Ngokuhambisana nalokho, isekela ukukhanya kwe-LED okukhazimulayo ngesikhathi sokusetshenziswa noma kube ithoshi elincane elisebenzayo.
Intengo yesithenjwa: 380,000 VND.
Buka Okuningi: [Review] Amabhange aphezulu ayi-5 adumile e-Remax namuhla
3.4 I-Premium Baseus M36 ibhange lamandla angenantambo
Ibhange lamandla angenantambo i-Baseus M36 elikhethekile ku-smartphone/Ithebhulethi inomklamo ohlangene, obude. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo uphinde ufakwe isibani se-LED esibonisa umthamo webhethri asele futhi udale ukugqama okuvelele komkhiqizo.
Ibhange lamandla le-Baseus M36 liphinde lisekele ukushaja okunezintambo nokungenantambo, ukuze ukwazi ukulisebenzisa ukushaja wonke amadivaysi ama-3 ngesikhathi esisodwa. Umkhiqizo ungashaja futhi ifoni ngokungenantambo ngisho noma ushaja ibhange lamandla ngaleso sikhathi. Isakhiwo se-inductor esinomgogodla we-copper wire sithuthukiswa nge-cross-section enkulu ukuze kuthuthukiswe kakhulu isivinini sokushaja okungenantambo.
Idivayisi iphinde isekele kufika ku-2.1A ukuze uthole isikhathi sokushaja esisheshayo, futhi iyahambisana nemishini eminingi yedijithali namuhla. Ibhethri I-Baseus wireless power bank Le divayisi iphinde ihlanganiswe nephrosesa yamandla ehlakaniphile ekwazi ukubona ngokuzenzakalela futhi ilungise amaleveli e-voltage, amanje kanye namandla ukuze ihambisane nezinhlobonhlobo zemishini. Ngesikhathi esifanayo, inamandla okuvimbela ukulayisha ngokweqile, ukushisa ngokweqile kanye nesifunda esifushane ngakho akubangeli umshini wokushisa.
Intengo yesithenjwa: 399,000 VND.
Ufuna ulwazi olwengeziwe: [Reviews] Ama-Selfie Sticks aphezulu ayi-5, Izitika ozishuthe zona ezihamba phambili zokuthwebula izithombe ozishuthe zona
3.5 I-Baseus 18W Parallel PD Power Bank Power Bank
Leli ibhange lamandla i-Baseus 18W Parallel elinebhethri eliyisipele le-Baseus Parallel PD Power Bank elinembobo ye-Micro USB kanye nohlobo C lwe-USB (2A max line) ukuze kuncishiswe isikhathi sokushajwa ngokugcwele ibhethri elishajekayo. Ngaphezu kwalokho, imbobo yokukhiphayo izimbobo ezi-2 ze-USB kanye nembobo yohlobo C ye-USB engu-1 yokusekela ukushaja Okusheshayo okungu-3.0 kanye Nokulethwa Kwamandla (PD 3.0), ukuze amadivayisi angu-3 akwazi ukushajwa ngesikhathi esifanayo. Ngaphezu kwalokho, ngembobo yohlobo C lwe-USB, nobabili ningasebenzisa idokhu yokushaja yebhethri futhi niyisebenzisele ukushaja amanye amadivayisi.
Ikakhulukazi, i-Baseus Parallel PD Power Bank isekela ukushaja okusheshayo ngokwezinga Lokulethwa Kwamandla (PD 3.0) elinamandla afika ku-18W. Ukusuka lapho, abasebenzisi bangasebenzisa ishaja yohlobo C noma ezinye izinhlobo eziningi zeMacbook. Izinga lomthamo we-20,000mAh lisekela ukushaja okusheshayo futhi lamanje kufika ku-2A. Ukuze ukwazi ukushaja ngokugcwele ibhethri yefoni ku-80% ngemizuzu engama-30 kulula kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 750,000 VND.
Ngakho-ke sethule ngempumelelo kubafundi Amabhange aphezulu angu-5 ase-Baseus ashisayo futhi athenjwa kakhulu emakethe namuhla. Sethemba ukuthi ngalawa masheya uzothola ngokushesha ibhethri elihle eliyisipele le-Baseus, ungabe usazikhathaza ngokuthi ifoni yakho iphelelwa ibhethri ngisho nalapho uhamba noma uphuma.
Xem Thêm Top 4 thương hiệu bánh trung thu chay ngon đúng chuẩn mỹ vị | Muasalebang
Tổng hợp 6 cách làm bánh bằng bột bắp mới lạ đơn giản hấp dẫn | Muasalebang
[Review] Kem trị nám White Shinno Nhật Bản có tốt và hiệu quả? | Muasalebang